Online Marg | बाइडेन सत्तामा आएपछि अमेरिकामाथि अहिलेसम्मकै ठूलो बज्रपात, अब के गर्लान् राष्ट्रपति बाइडेन ?
बाइडेन सत्तामा आएपछि अमेरिकामाथि अहिलेसम्मकै ठूलो बज्रपात, अब के गर्लान् राष्ट्रपति बाइडेन ?
एजेन्सी – बाइडेन प्रशासन सत्तामा आएपछि अमेरिकामाथि अहिलेसम्मकै ठूलो बज्रपात भएको छ । अमेरिकालाई उछिन्दै चीन विश्वकै धनी देश बनेको हो । परमार्शदाता म्याकिन्से एण्ड कम्पनीले एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो २० वर्षमा चीनको सम्पत्ति तीन गुणाले बढेको जनाएको हो ।
म्याकिन्से एण्ड कम्पनीले १० ओटा देशहरुको राष्ट्रिय तथ्यांकको आधारमा रिपोर्ट तयार पारेको हो । यी देशहरुले विश्वको आम्दानीको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।